RASMI: Cristiano Ronaldo oo ku guuleystay abaal-marinta xiddiga bisha ee horyaalka Premier League… (Yuu ku garaacay abaal-marintan?) – Gool FM
Haaruun May 12, 2022
(Manchester) 12 May 2022. Cristiano Ronaldo ayaa ku guuleystay abaal-marinta xiddiga bisha April 2022 ugu fiicnaa horyaalka Premier League ee EA SPORTS Player of the Month, waana markiisii labaad ee xilli ciyaareedkan uu ku guuleysto abaal-marintan.
Weeraryahanka Manchester United ee Ronaldo ayaa bandhig cajiib ah sameeyey bishii la soo dhaafay ee April, waxaana uu dhaliyey shan gool kaliya afar kulan oo uu bishaas u saftay horyaalka Naadigiisa Red Devils.
Waxa uu helay abaal-marintan inkastoo uu seegay guuldarradii cusleyd ee 4-0 oo Man United ka soo gaartay Liverpool.
Ronaldo ayaa kulankaas ku seegay sababo la xiriira geeridii ku timid wiilkiisii yaraa ee markaas uun dhashay.
Abaal-marintan ayaa ka dhigan in xiddiga heerka caalami ee dalka Portugal uu ku guuleysto markiisii 6-aad abaal-marinta xiddiga bisha ee horyaalka Premier League, tiradaas oo hal ka yar inta ay haystaan weeraryahanka Kooxda Tottenham Harry Kane iyo xiddigii hore ee Manchester City, Sergio Aguero oo ah 7 jeer.
Bishii la soo dhaafay ee April, Ronaldo ayaa dhaliyey goolkiisii 100-aad ee Premier League, kulankii ay guuldarrada 3-1 kala kulmeen Arsenal, halka sidoo kale loo diiwaan geliyey saddexleeydiisii 50-aad ee heer kooxeed kulankii ay 3-2 guusha ka gaareen Norwich City.
Ronaldo ayaa dhaliyay goolkiisii shanaad ee bisha, kulankii uu barbaraha 1-1 ka dhigay ee ay la ciyaareen naadiga Chelsea.
Weeraryahankan CR7 ayaa kaalinta koowaad ka galay oo abaal-marintan ku garaacay xiddigaha kale ee u sharraxnaa, kuwaasoo kala ah; Nathan Collins, Kevin De Bruyne, Bruno Guimaraes, Gabriel Jesus, Son Heung-min, Thiago iyo Leandro Trossard.
Tottenham oo guul ka gaartay 10 xiddig oo kooxda Arsenal ah